Caafimaadka: Daroogada PNEUMOREL ayaa laga mamnuucay Cameroon - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Caafimaadka: Daroogada PNEUMOREL ayaa laga mamnuucay Cameroon
Wasiirka Malachie Manaouda, oo asalkiisu yahay tallaabadani waxay ku saleysan tahay "saameynta xun ee laga soo sheegey heerka caalamiga ah ee kormeerka iyo ku xirnaanta isticmaalka" ka midka ah cilaaqaadkan.
PNEUMOREL aan loo baahnayn Cameroon. Tani waa war saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka Bulshada Malachie Manaouda, oo ku qoran wargeyska 20h30 ee CRTV-Télé kaas oo ku dhawaaqaya. Waxay ku salaysan tahay "Saameynta xun ee laga soo sheego mareegta caalamiga ah ee la socoshada iyo la xidhiidha isticmaalka daroogada PNEUMORAL ee sharoobada iyo kiniinnada, oo ay ku jiraan cudurrada wadnaha ee dhici kara" si loo go'aamiyo, "Sida waafaqsan mabda'a taxadarka", "Si dhakhso ah u joojiso isticmaalka, fogeynta iyo qaybinta dhammaan noocyada dawadan ilaa illaa ogeysiis dheeraad ah".
Faransiiska, ciribtirka ayaa laga saaray suuqa ilaa 8 Febraayo 2019. Bukaannada ayaa la waydiiyay inay sanduuqyada ku soo celiyaan farmashiyaha si loogu celiyo. PNEUMOREL waxaa laga iibsaday Faransiiska oo ka yimid 1973 oo u shaqeynayey Shaqaalaha Labiska. Wakaaladda Qaranka ee Badbaadada Daawooyinka (Ansm), oo soo saartay Oggolaansho Suuqgeed, oo la soo jeediyey in bukaanku"Daawooyinka kale ee qufaca, halis yar".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/13/sante-le-medicament-pneumorel-interdit-au-cameroun/
Cancer Pride: galabtii si ay ula wadaagaan dagaalka ka dhanka ah cudurka